माधव नेपालले प्रजातान्त्रिक पद्धतिको प्रणालीलाई नै विस्थापित गरिदिनु भयो : प्रदीप नेपाल
काठमाडौं, साउन २ । एमाले नेता प्रदीप नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई देखाइ दिने नाममा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गम्भीर अपराध गर्नुभएको ठोकुवा गर्नुभएको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाल निकट नेता प्रदिपले माधवले गर्नुभएको यो नराम्रो कामलाई इतिहासले कठोर मुल्यांकण गर्ने आफ्नो निश्कर्ष पनि राख्नुभएको छ ।
माधव नेपालले आफ्नो इगोको लागि गर्नै नहुने काम गरेको प्रदीपको भनाई छ । ‘जहाँसम्म माधव नेपालको कुरो छ, मैले यहाँ केही लेखिरहनु नपर्ला । संविधान बचाएँ भनेर उहाँले जति भने पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा भनिने शक्ति पृथकीको प्रणालीलाई नै विस्थापित गरिदिनु भयो, ‘माधव नेपालकै कारण सर्वाेच्चले संबिधानमाथि आक्रमण गरेको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा नेपालले लेख्नुभएको छ ।
यस्तो छ प्रदीपको निचोड
यसपालि पनि न्यायलयको ओभरल्यापले अप्ठ्यारो निम्त्याउने खतरा छ । अदालतले केपी ओलीलाई ठेगानमा ल्याएर बाँकी काम संसद्को जिम्मा दिनुपथ्र्यो । सांसदले आफ्नो अधिकार खोसिएको टुलुटुलु हेरिरहनु पर्ने ! त्योभन्दा सजिलो त सधैँभरिका लागि अदालतले नै संसद्को व्यवस्थापन गर्ने साहसिक निर्णय गरे भइहाल्थ्यो !
फैसलापछि मैले तीन जनाको प्रतिक्रिया सुनेँ । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता । उहाँले फैसलाको प्रशंसामा गीत गाउनु स्वाभाविकै थियो । तर उहाँले जब प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिनुपर्र्छ भन्नुभयो – म छक्क परें । वरिष्ठ अधिवक्ताको ज्ञान यस्तै हुन्छ ? मुद्दा व्यवस्थापिकाको हो । राष्ट्रपति कसरी जोडिन आउनुभयो त्यहाँ ? ! महिलालाई पहिलो पद दिनु हुँदैन भन्ने पुरुष मानसिकता मात्र हो यो । काँग्रेसका मान्छेहरू किन महिलालाई पहिलो पदमा आउन हुन्न भन्छन् ? पहिले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीमाथि उहाँहरू महाअभियोग लगाउने चेतनामा पुग्नु भएको थियो, अब अहिले विद्या भण्डारीतिर आँखा गाडिएको छ उहाँहरूको । केपी ओलीको ‘मनपरी’ लाई रोक्नेसम्मको फैसलासम्म ठीक छ अदालतको । तर संसद्को अधिकारमाथि आफ्नो अधिकार थोपर्ने काम चाहिँ बेठीकै हो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।